Fampitandremana maika nataon'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Francesco Frangialli
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Fampitandremana maika nataon'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Francesco Frangialli
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • WTN
Samy nanana ny ampy avokoa ny sekretera jeneralin’ny UNWTO teo aloha Francesco Frangialli sy ny Dr. Taleb Rifai.
Ny taratasim-panoratana farany nataon'ny Sekretera jeneraly teo aloha dia miresaka momba ny fisolokiana, fitsarana Stalinista ary teboka iray izay na dia ny rariny aza dia lasa tsy rariny.
Francesco Frangialli, ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO ary namaly izany ny lehiben’ny fikambanana teo aloha Ny taratasin'i Zurab Pololikashvili ho an'ny firenena mpikambana rehetra avy amin'ny tamin'ny herinandro lasa.
Francesco Frangialli dia sekretera jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany avy amin'ny Firenena Mikambana nanomboka tamin'ny 1997 ka hatramin'ny 2009 ary isaina ho iray amin'ireo olona hajaina indrindra amin'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany manerantany.
Ny zava-bita lehibe nataon'i Frangialli amin'ny maha sekretera jeneraly azy dia nahitana ny “famoronana rafitra eken'ny rehetra mba handrefesana ny fiantraikan'ny fizahantany eo amin'ny toekarem-pirenena sy ny fandraisana ny Fehezan-dalàna mifehy ny fizahantany maneran-tany mba hamporisihana ny fizahantany tompon'andraikitra sy maharitra.
Io fanitsakitsahana io fitsipi-pitondran-tena io no antony nahatonga ny lehiben’ny UNWTO teo aloha hiteny an-keriny amin’ny alalan’ny taratasy misokatra hanoherana ny mpitarika ny fikambanana ankehitriny.
Atoa Francesco Frangialli dia nilaza tamin'i Zurab Pololikashvili tamin'ny valinteniny tamin'ny taratasy misokatra:
Ry solontena malalan'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany,
Taratasy misokatra voalohany: WTN ho an'ny fahamendrehana amin'ny Fifidianana UNWTO
Taratasy misokatra faharoa ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO momba ny tatitra nataon'ny tompon'andraikitra etika momba ny kolontsaina sy ny fomba fitantanana ao amin'ny Fikambanana
Manoratra aminao aho amin'ny maha-Sekretera jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany teo aloha. Ho an'ireo izay tsy mahalala ny vanim-potoana talohan'ny tantara dia Sekretera jeneraly lefitra aho nanomboka tamin'ny 1990 ka hatramin'ny 1996, Sekretera jeneraly. ad interim tamin'ny 1996-1997, ary ny Sekretera jeneralin'ny 1998 ka hatramin'ny 2009. Nandritra ny vanim-potoana 2001-2003, izaho no nitarika ny fanovana ny Andrim-panjakanay ho sampana manokana an'ny Firenena Mikambana.
Ny fiadidiana ny Sekretariat dia mametraka, raha ny fahitako azy, ny fifehezan-tena, indrindra amin'ny fotoana izay izoran'ny Fikambanana amin'ny zotram-pifidianana amin'ny fanendrena ny sekretera jeneraly mandritra ny efa-taona ho avy. Izany no antony, na dia mizara ny ankamaroan'ny hevitra voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity aza aho, dia tsy nanao sonia ilay taratasy misokatra izay nalefan'ny vondrona manamboninahitra ambony ho anao.
Saingy ny taratasy vao haingana nivezivezy ho valin'ny Sekretera jeneraly am-perinasa sy ny fiampangana diso ao anatiny dia manery ahy hanao fanehoan-kevitra ampahibemaso momba ny teboka roa.
Raha ny fotoana nitondrako azy aloha dia tsy azoko ekena ilay filazana hoe "Nisy ny tsy fanarahan-dalàna ary maro ireo firenena mpikambana manan-danja no niala, toe-javatra iray izay ezahan'ny Fikambanana sitranina hatramin'izay."
Rehefa niresaka momba ny "tsy fanarahan-dalàna", tsy afaka mijanona manjavozavo. Tokony ho fantarina ny tsy fanarahan-dalàna rehetra. Tsy maintsy lazaina hoe oviana no niseho, iza no tompon’andraikitra tamin’izany, ary iza no firenena niala tamin’izany.
Izany indrindra no atao hoe fitsarana Stalinista
Fony aho Sekretera jeneraly dia tsy nisy firenena manan-danja niala tamin'ny Fikambanana.
Rehefa niditra tao amin'ny WTO aho tamin'ny naha-Sekretera jeneraly lefitra an'i Antonio Enriquez Savignac, dia nikorontana tanteraka ny Fikambanana. Firenena maro any Amerika Afovoany, toa an’i Costa Rica sy Honduras, ary any Azia-Pasifika, toa an’i Philippines, Thailandy, Malezia, ary Aostralia, no niala; ny Etazonia dia tokony hanaraka haingana. Miaraka amin'ilay teo alohako, ary, taty aoriana, nibaiko ny tenako, dia nahomby izahay tamin'ny famadihana io fironana io.
Tamin'ny nandaozako ny UNWTO tamin'ny 2009 dia nanana mpikambana 150 ny Andrimpanjakana. Niditra indray ireo firenena aziatika rehetra izay niala teo aloha, ary tonga ireo firenena vaovao eto amin'ity faritra ity, izay tena ilaina amin'ny indostrian'ny fizahantany. Firenena manan-danja toa an'i Arabia Saodita, Kroasia, Serbia, Ukraine, Kazakhstan, ary Afrika Atsimo, ary ny maro hafa, no nanatevin-daharana. Letonia, Litoania, Royaume-Uni, Norvezy, Aostralia ary Kanada no mpikambana.
Nahazo taratasy avy amin’ny governemantan’i Nouvelle-Zélande aho nilaza ny fikasany hiditra. Ny sekreteran'ny varotra any Etazonia dia nanoro hevitra ny filohany. Rehefa mamaky ny taratasin'ny Sekretera jeneraly aho dia faly mahafantatra fa ny mpitantana ankehitriny dia miasa mba "hanaisotra" ny tsy fisian'ny firenena lehibe sasany. Marihiko fa efa-taona izay no nitantana azy fa tsy nisy vokany.
Noho ny fandraisan'anjara avy amin'ireo firenena “manankarena” ireo, fa koa amin'ny fitantanana ny fanavaozana amim-pitandremana, ary ny famerana henjana ny saran'ny mpiasa, izay tsy hita maso, dia nankafizin'ny UNWTO tamin'ny fotoana nialako, ny ambim-bola be dia be, mamela famatsiam-bola ny fandaharan'asa manankarena sy isan-karazany ho an'ny tetibola ho avy 2010-2011. Raha "fatiantoka ara-bola mafy” efa nisy na misy ankehitriny, tsy manomboka amin’io vanim-potoana io.
Faharoa, tsy azoko ekena ny fiheverana fa, satria nankatoavin’ny Filankevitra izany, dia tapaka sy nampiharina tamin’ny fomba marina, mangarahara ary demokratika ny fomba fanolorana kandidà ho amin’ny toeran’ny Sekretera jeneraly. Tsy nisy toy izany.
Miaraka amin'ny mpandimby ahy amin'ny maha-Sekretera jeneraly ahy, Dr. Taleb Rifai, ary tsy mitsabaka amin'ny fomba rehetra amin'ny safidy horaisina, dia nampitandrina izahay amin'ny fotoana mety amin'ny loza mety hitranga amin'ny fandaharam-potoana naroson'ny sekretera jeneraly-kandidà ary neken'ny ny Filankevitra Mpanatanteraka tamin'ny fivoriana faha-112 tao Tbilisi. Raha re ny feonay dia tsy hisy ny fisalasalana izay misy fiantraikany amin'ny maha ara-dalàna ny zotram-pifidianana manontolo ankehitriny.
Fivoriana tany an-tanindrazan'ny amperinasa tamin'ny fotoana izay tsy nahafahan'ny mpikambana maro tao amin'ny Filankevitra nandeha noho ny valan'aretina ary rehefa maro tamin'izy ireo no nisolo tena ny masoivohon'izy ireo tany Georgia, dia nampiditra fitongilanana mazava.
Nankatoavin'ny Filankevitra ny fandaharam-potoana izay nahatonga ireo mpilatsaka hofidina tsy ho afaka hanambara ny tenany, hahazo fanohanana avy amin'ny governemantany, hamolavola sy hampiely ny fandaharan'asany ary hanao fampielezan-kevitra ara-dalàna. Io famerana fotoana tsy ara-drariny tanteraka io, miaraka amin'ny fepetra ara-pahasalamana manjaka sy ny vanim-potoanan'ny faran'ny taona, dia nanakana ireo kandidà tsy handeha hitsidika ireo firenena mpifidy. Ny fanatontosana ny fifidianana tany Madrid dia nankasitraka ny Sekretera jeneraly efa lasa, amin'ny maha ambasadaoron'i Espaina azy taloha. Izany rehetra izany natambatra dia nanome tombony amin'ny fifaninanana tsy ara-drariny ho an'ny mpifaninana amin'ireo mpifaninana.
Ny anton'ny fe-potoana fohy mahatsikaiky teo anelanelan'ny fotoam-pivoriana roan'ny Filankevitra dia ny hisian'ny fivoriana faha-113 tany Madrid niaraka tamin'ny foara fizahan-tany manan-danja ao Espaina, ny FITUR. Fanafenana tsotra izao ny tena marina tamin’ireo Mpikambana izany, satria efa hita hatrany am-boalohany fa noho ny valanaretina dia tsy ho tanteraka araka ny nokasaina tamin’ny volana janoary ny FITUR. Araka ny nomarihina tao amin’ilay taratasy nosoniaviko niaraka tamin’i Taleb Rifai, dia tokony hitondra vahaolana mifanohitra amin’izany ny tontolo madio madio: ny fanaovana ny fivorian’ny Filankevitra amin’ny tara araka izay azo atao, amin’ny lohataona toy ny mahazatra, na amin’ny fiandohan’ny fivoriambe mihitsy aza.
Amin'ny toe-javatra toy izany, ny fandrosoan'ny daty dia fitaka fotsiny.
Ny Sekretera jeneraly efa ho avy dia miady hevitra ao amin'ny taratasiny fa ny fomba narahina dia ara-dalàna tanteraka, ary latsaka "eo anivon’ny Filankevitra mpanatanteraka mihitsy".
Marina tanteraka izany. Tsy ampy anefa ny maha ara-dalàna. Amin'ny fanodinkodinana ny dingana, dia mety ho ara-dalàna sy maloto fitondran-tena ianao.
Mety hifanaraka amin'ny lalàmpanorenana amin'ny fomba ofisialy ny zotram-pifidianana, saingy sady tsy rariny no tsy mitovy. Amin'ny faran'ny andro, tsy etika.
Araka ny nosoratan'i Sophocles:
"Misy teboka ankoatra izay na dia ny rariny aza dia lasa tsy rariny".
Manantena aho fa ny Fihaonambe, amin'ny maha-izy azy ny "taova faratampony” an’ny UNWTO, dia hanao izay ilaina mba hisian’ny fifidianana madio ao Madrid sy hiverenan’ny fitantanana tsara ny Fikambanana.
Mirary fijanonana mahavokatra sy mahafinaritra ho anareo rehetra any Espaina aho.
Novambra 22nd, 2021
Sekretera jeneralin'ny UNWTO